Guuldarooyin aan la fileyn oo Itoobiya ay kala kulantahay Doorashadii Baarlamanka | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Guuldarooyin aan la fileyn oo Itoobiya ay kala kulantahay Doorashadii Baarlamanka
Doorashada Sanadka Ka dhaceysa Soomaaliya waxaa ay leedahay wejiyo Badan iyo Siyaasiyiin kala Mowqif iyo aragti duwan kuwaas oo leh dano iyo siyaasado is diidan hadana uu qorsho hoodu yahay in aan laga garan waxa ay doonayaan & Cida ay adeegaha u yihiin.
in kastoo Umadda Soomaaliyeed la socoto xaqiiqooyinka ka jira Dalka iyo danaha Maldahan ee Dowlada Cadowga ku ah Soomaaliya ay doonayaan in xitaa dalka Madaxdiisa ay iyagu u noqdaan kuwo ka shidaal qaata ayaa waxaa soo baxaya qorsho cusub oo itoobiya kaleedaha dalka Balse ka dhicisooway.
Qorshaas waxaa uu ahaa in Xukuumada Hailemariam Desaleg ay Wakiil ku dhax yeelato Madaxda dalka gaar ahaan tan Hogaanka Golaha shacabka kaas oo u noqda Hogaan haga’ha kal fadhiyada baarlamaanka sida guddoomiyaha ama ku xigeenkiisa.
Sida lawada ogyahay Doorashadii loo galay Guddoomiyaha Baarlamaanka Dalka waxaa isku soo sharraxay Afar Musharrax oo Mid kamid ah uu ahaa C/rashiid Maxamed Xiddig oo ay wadatay sid aillo lagu kal soonyahay xaqiijiyeen Dowlada Itobiya.
Xiddig Musharraxnimadiisa waxaa diidanaa Siyaasiyiinta iyo waxgaradka Beesha uu ka so jeedo waxaana culeys lagu saaray in uu ka tana sullo Xilkaas, Laakiin Xiddig oo ay wadatay Dowlad itoobiya dalabkaas waa uu ka dhega fureystay waxaana uu galay tartankii Guddoonka Baarlamaanka ilaa markii dambe laga guuleeystay.
Ujeedada itoobiya, waxaa uu damaceeda ahaa in Xiddig oo ay wadatay uu ku guuleeysto Guddoomiyaha Baarlaanka, Waxaase diiday oo ka hortagay xildhibaanada Baarlamaanka oo codkii kalsoonida u diiday Xiddig una codeeyay Maxamed Sheekh Cusmaan “Jawaari” oo isagu ah qunyar usocod dowlada wadata aysan jirin sida la rumeysan yahay.
Halkaas Xukuumada RW Hailemariam Desalegn waxaa ka soo gaaray niyad jab xoogn iyo khasaaro siyaasadeed,intaas kuma aysan harine bal waxaayba u muuqatay in ay ka sii digtooneyd oo waxaa ay soo sharaxday Faarax sheekh oo u sharraxnaa Guddoomiye ku xigeenka kowaad.
Hankii iyo Howshii Hailemariam Desalegn iyo Xukuumadiisa Markale ayaa Afka ciida loo geliyay Markii Cabdiwali sheekh Ibraahim Muudeey oo la tar tamaya Faarax sheekh uu ka guuleystay weliba cod aqlabiyad leh ay ku doorteen Mudana yaasha Baarlamaanka.
Dadka siyaasada wax ka odorosa waxaa ay sheegayeen intii doorashada aysan bilaaban in Faarax uu soo bixi karo oo uu guuleeysanayo maadaama Xisbiga Dalka afartii sano ee la soo dhaafay ka ariminayay uu ku jiro xiriir wanaagsan uu la leeyahay Dowlada itoobiya.
Dowlada Hailemariam Desalegn waxaa ay waday Maalmihii ay soo dhaweyd doorashada Guddonka Baarlamaanka Olale ay qeyb ka ahaayeen Saraakiil Ka tirsan Madaxtiiyada Villa Somalia iyo Janaraal Gebra oo wakiil itoobiya uga ah Dalka soomaaliya.
Ugu Dambeyn Dowlada itoobiya siyaasada soomaaliya iyo Madaxda soomaalida galaangal iyo taageero ayeey ku leedahay hadan Labadii qorsho ee ugu horeeysay Doorashooyinka dalka Itoobiya guul darro ayeey kala kulantay waxaana soo xumaaday rajadii ay qabtay oo ahaa in ay hagi karto hogaanka Xildhibaanada Golaha Shacabka taas oo derbi adag oo aan laga gudbi karin ay ku noqotay Xildhibaanada Baarlamaank.